Panoitika Dambudziko | Mhuri Inofara
“Muri kufara zvikuru muna izvozvi, kunyange kwenguva duku panguva ino, kana zvichifanira kudaro, mave muchishungurudzwa nemiedzo yakasiyana-siyana.”—1 Petro 1:6
Kunyange ukaedza zvose zvaunogona kuti uve newanano inofadza uye mhuri inofara, zvinhu zvisingatarisirwi zvinogona kuitika zvoita kuti zvikuomere kuramba uchifara. (Muparidzi 9:11) Mwari anotibatsira nerudo patinotarisana nematambudziko. Kana ukashandisa mazano anotevera ari muBhaibheri, iwe nemhuri yako muchakwanisa kutsungirira kunyange mumamiriro ezvinhu akaoma zvikuru.
1 VIMBA NAJEHOVHA
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: ‘Kanda kuzvidya mwoyo kwako kwose paari, nokuti iye ane hanya newe.’ (1 Petro 5:7) Gara uchiyeuka kuti Mwari haasi iye anokonzera matambudziko ako. (Jakobho 1:13) Sezvaunoswedera pedyo naye, achakubatsira zvikuru. (Isaya 41:10) ‘Durura mwoyo wako pamberi pake.’—Pisarema 62:8.
Uchanyaradzwawo paunoverenga uye paunodzidza Bhaibheri rako zuva nezuva. Nemhaka yaizvozvo, uchaona kuti Jehovha “anotinyaradza [sei] pakutambudzika kwedu kwose.” (2 VaKorinde 1:3, 4; VaRoma 15:4) Anovimbisa kukupa “rugare rwaMwari runopfuura kufunga kwose.”—VaFiripi 4:6, 7, 13.
Nyengeterera kubatsirwa naJehovha kuti urambe wakadzikama uye kuti ufunge zvakanaka
Ongorora zvose zvaunogona kusarudza uye sarudza chakanyanya kukunakira chacho
2 ZVITARISIRE UYE TARISIRA MHURI YAKO
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Mwoyo womunhu anonzwisisa unowana zivo, uye nzeve dzevakachenjera dzinotsvaka kuwana zivo.” (Zvirevo 18:15) Wana maidi ose. Ziva zvinodiwa nemunhu wose wemumhuri mako. Taura navo. Inzwa zvavanotaura.—Zvirevo 20:5.
Ko kana munhu waunoda akafa? Usatya kubudisa manzwiro ako. Yeuka kuti kunyange Jesu “akasvimha misodzi.” (Johani 11:35; Muparidzi 3:4) Kuwana nguva yakakwana yokuzorora neyokurara kunokoshawo. (Muparidzi 4:6) Izvi zvichaita kuti zvive nyore kutsungirira zvinhu zvinoshungurudza.
Matambudziko asati aitika, gara uchitaura nemhuri yako. Paanozoitika, inonzwa yakasununguka kutaura newe
Taura nevamwe vangave vakambosangana nezvakadaro
3 WANA RUBATSIRO RWAUNODA
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Shamwari yechokwadi ine rudo nguva dzose, uye ihama inoberekerwa kubatsira pakunenge kuine kutambudzika.” (Zvirevo 17:17) Shamwari dzako dzinoda kukubatsira, asi dzingasaziva zvokuita. Usarega kudziudza zvaunonyatsoda. (Zvirevo 12:25) Uyewo, tsvaka kubatsirwa mune zvokunamata nevaya vanonzwisisa Bhaibheri. Mazano avangakupa anobva muBhaibheri achakubatsira.—Jakobho 5:14.
Uchawana rutsigiro rwaunoda paunogara uchiwadzana nevanhu vane kutenda kwechokwadi muna Mwari uye vanovimba nezvipikirwa zvake. Uchanyaradzwawo zvikuru paunobatsira vamwe vanoda kukurudzirwa. Vaudze nezvokutenda kwaunoita muna Jehovha uye nezvipikirwa zvake. Ramba wakabatikana nokubatsira vanhu vanoda kubatsirwa, uye usazviparadzanisa nevaya vanokuda uye vane hanya newe.—Zvirevo 18:1; 1 VaKorinde 15:58.
Taura neshamwari yepedyo uye rega ikubatsire
Kunyange ukanzwa wakaomerwa, pfungwa dzako ngadzirambe dziri pana Mwari. Paaiva mumatambudziko, Jobho akati: “Zita raJehovha ngarirambe richirumbidzwa.” (Jobho 1:21, 22) Kufanana naJobho, funga nezvezita raJehovha uye kuda kwake kupfuura kufunga zvinokunetsa. Zvinhu pazvisingafambi sezvaungave uchishuva, usarasa tariro. Nyatsovimba naMwari. “‘Ndinonyatsoziva pfungwa dzandiri kukufungirai,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘pfungwa dzorugare, kwete dzedambudziko, kuti ndikupei nguva yemberi netariro.’”—Jeremiya 29:11.
Ndinonyatsovimba naJehovha here kunyange muzvinhu zvidiki?
Zvikonzero zvipi zvinoita kuti nditende Jehovha zuva nezuva pamusana pokunaka kwake?
Ronaldo akafirwa nehama dzake 5 mota yavo payakaita tsaona makore 16 akapfuura. Kunyange zvichiri kumurwadza, akawana chinhu chakamunyaradza.